गृहमन्त्रीज्यू ! मेरो बहिनीको ठाँउमा तपाईको बहिनीको हत्या भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ? – YesKathmandu.com
गाँउको सोझा सिधा छोरी÷चेलीलाई माया प्रेमको मोह जालमा फसाएर शारिरिक सम्बन्ध राख्ने,गर्भ बोकाउन र पेटमा पाप हुर्कदै जाँदा त्यो चेलीलाई स्वीकारेर आफ्नो बनाउनु पर्ने समयमा हत्या गरिदिने ? अनि,पाप पखाल्न राजनीतिक दलको आड लाग्दै मुद्धालाई प्रभावित पार्ने र हत्यालाई आत्महत्यामा बदलिने । हो,यस्तै त्रासदिपूर्ण घटना भोगेको एक पीडित हुँ म । जो न्यायको भीख माग्दै हिडिरहेको छु ।
गोर्खा क्याम्पसमा स्नातक दोश्रो वर्षमा अध्ययनरत थिइन मेरी बहिनी कृष्णा गिरी । सामाजिक सञ्जालबाट नजिकिइएका रहेछन सर्लाही कडरिया ६ का अविनाश भारतीसँग । डेढ वर्ष अगाडि सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएको यि दुई बीचको देख भेट विनाकै नाता यति धेरै गहिरियो कि बहिनी घर परिवार छाडेर रातारात काठमाडौं आइन । गाँउकै युनाइटेड वोर्डिङ स्कूलमा पढाँउदै आएकी उनी घर परिवारको सल्लाह विना काठमाडौं आएकी थिईन । र र्कीतिपुरको ट्याङ्लाफाँटमा चीरिकाजी मर्हजनको घरमा डेरा लिएर बस्न थालिन । सोही घरमा बस्ने रहेछन अविनाश । यसरी सामाजिक सञ्जालबाट नजिकिएका उनीहरु काठमाडौंमा आएर लिभिङ टुगेदरको रिलेसनमा बस्न थालेका थिए ।
उनै अविनाशले बहिनीलाई सुरज आर्केटमा जागिर लगाइदिएका रहेछन । यसरी बहिनीले गाँउ छाडेर आएको वैशाखमा । यो ६ महिनाको अवधीमा फोनमा तारान्तार घरमा सम्र्पक भइरहेको थियो । सबै कुरा राम्रै थियो । तर।गत असोज २ गते बहिनीको आत्महत्या गरेको खबर आयो । भन्नलाई आत्महत्या भनियो तर यो सुनियोजित हत्या थियो । किनभने सोही दिन बहिनीले कार्यलयबाट फर्कदै गर्दा बेलुका ७ बजेर २४ मिनेट जाँदा फोन गरेकी थिइन । पारिवारिक कुरा मात्रै भएको थियो अन्य त्यस्तो केही कुरा भएको थिएन । टेकुबाट बहिनीले फोन गर्दा बुवा आमासँग ट्राफिक जाममा भएका कारण घर पुग्न ढिला हुने बताएकी थिइन ।
तर,सोही दिन अविनाशले सुरज आर्केटमा फोन गरेको रहेछ । चाडैं रुममा आइज भनेर थर्काएको कारण बहिनी कार्यलयमै रोइन । कार्यलयमा सुरज आर्केटको साधरणसभाको तयारी चलिरहेको थियो । सोही काममा उनी व्यस्त थिइन । बहिनीले घर जान ढिलो गरेपछि सुरज आर्केटकै प्रतिनिधिलाई हकारेका सुरज आर्केटकै कर्मचरी बताँउछन । साढे सात बजे टेकु जाममा छु भनेको मेरो बहिनीले आठ बजे र्कीतिपुरमा आत्महत्या गरेको खबर आयो । बहिनीको आत्महत्या नभएर हत्या नै हो भन्ने हाम्रो शंका गाढा हुनुपर्ने केही प्रमाणहरु छन । त्यहाँ सुसाइट नोट लेखिएको छ तर त्यो बहिनीको अक्षर कुनै हालतमा पनि होइन ।
र त्यहाँ प्रयोग भएका लवज/शव्द हाम्रो गाँउ ठाँउमा बोल्ने लवज होइन । दोश्रो,बहिनीको हत्या लगतै वल्खुमा रहेको वयोधा अस्पतालमा ल्याएको रहेछ उनै अविनाशले बोकेर र प्रहरीलाई खबर गर्ने पनि उनै रहेछन । अस्पतालमा आँउदा तिनको मुखबाट रक्सीको दुर्गन्ध आइरहेको थियो । कहिल्यै सारी नलगाउने मेरो बहिनीले सारीकै सुर्काे पारेर झुण्डिएर प्राण त्यागेको दाबी गरिएको छ ।
सोही दिन प्रहरीसँगको बयानमा सुरुमा मेरो बहिनी भनेका छन भोलीपल्टै बयान दिँदा गर्लफ्रेण्ड भनेका छन । अघिल्लो दिनको बहिनी भोलीपल्टै गर्लफ्रेण्ड कसरी भइ ? पेशाले शिक्षक हुँ । वालाजुमा रहेको एउटा वोर्डिङ स्कूलमा आवद्ध छु । खबर सुन्ने वित्तिकै वयोधा अस्पताल बल्खु पुगे । त्यहाँ पुग्दा बहिनीको मुखबाट फिँज आइरहेको थियो । नाकबाट रगत बगिरहेको थियो । बहिनीको सुनियोजित ढंगबाट हत्या नै भएको ठहर गर्न हामीलाई गाह्रो भएन । सोही राती नै र्कीर्तिपुरका इन्सपेक्टर सुवास कार्कीलाई भेट्यौं । उनको भनाईले पोलेको घाउमा झन नुन चुक लगाउने काम पो भयो ।
मर्ने त मरिहाल्यो,बाच्नेको भविष्य हेर्नुहोस भन्छन इन्सपेक्टर सा प । हामी जस्लाई अपराधी भनिरहेका छौं उनी उसैले उद्धार गरेको दावी गरिरहेका छन । पीडितलाई साथ दिनुपर्ने प्रहरीले उल्टै पीडकसँग मिलेर केस ढिसमिस पार्न खोज्यो । हामीलाई सह्य भएन ।
हाम्रो मुद्धा कीर्तिपुर प्रहरीले दर्ता लिनै नमाने पछाडि कालिमाटी प्रहरी वृत्तमा पुग्यौं ।
त्यहाँका डिएसपीलाई भेट्यौं । उनले लेखेर ल्याउनुहोस,मौखिक हुँदैन भने । आफैले लेखेर दिएको जाहेरी पनि दर्ता गर्न मान्दैनन,तिनैले देखाएको वकिललाई लेखाएर दिँदा पनि किटानी जाहेरी दर्ता गर्न मान्दैनन । पछाडि यो मेरो क्षेत्र भित्र पर्दैन कीर्तिपुर जानुहोस भन्दै फेरि उता पठाए ।
फेरि डिएसपी मेघ बहादुर खत्रीलाई भेट्यौं । उनले यो सुसाइड नै हो ह्याङगिङ नै हो भन्ने ठोकुवा गर्छन । कहिले यो केश दर्ता ग¥र्यो भने मेरो जागिर नै धरापमा पर्छ भन्छन । प्रहरी यतिधेरै निरीह भएर प्रस्तु भएको जिन्दगीमा पहिलोपल्ट देखे । उनैले विक्रम सिंह थापालाई भेट्न भने । त्यसो हो भने केश मैले दरपिट गर्न सकिन भनेर हस्ताक्षर गर्नुहोस अनि भेट्छौं विक्रम सिंह थापालाई भन्ने अड्डी लिए पछाडि बल्ल जाहेरी दर्ता भयो । त्यहाँका इन्सपेक्टर सुवास ढकालले उल्टै हामीलाई थर्काएर उल्टै तपाईलाई जेल हाल्छु भनेको पनि बिर्सिएको छैन । मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा भन्ने नारा घन्काउने प्रहरी प्रहरी संगठनका हाकिमहरुका संगठनका प्रहरीहरु यति बिध्न क्रुर भएको पनि जिन्दगीमा पहिलोपल्ट देखे ।
प्रहरीको वर्दी लगाएर जस्ले जे गरे पनि छुट हुँदो रहेछ ।
एकातिर बहिनी गुमाएका पीडामा छौं । अर्काेतिर राज्यको संयन्त्रमा एउटा निवेदन दर्ता गर्न दखोजेको दुई दिन भयो । कहिले यताबाट उता पठाँउछन,कहिले उताबाट यता ।
दुई दिन लगाएर बल्ल तल्ल निवेदन दर्ता त गरियो । मुचुल्का उठाइयो त्यहाँ पनि पीडत पक्षको कोही नराखी एकपक्षिय ढंगबाट । लाखलाई बल्खुबाट टिचिङ अस्पताल लैजादा समेत हाम्रो पक्षबाट कोही थिएन । मुचुल्काको एक प्रति फोटोकपी देउ न भन्यो दिनै मिल्दैन भन्छन । अहिले यी अपराधीलाई गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नै सुरक्षा गरिरहेका छन ।
बुझिए अनुसार,अविनाश भारतीको बाउ सर्लाही काँग्रेसका नेता,एउटा दाजु प्रहरी इन्सपेक्टर र अर्काे दाजु ‘ए’ लेभलकै ठेगदार । यसरी एउटा हत्यारालाई राज्यले संरक्षण गर्दैछ र हामी पीडित न्यायको भीख माग्दै कहिले यता कहिले उता गरिरहन बाध्य छौं ।
पोष्टमार्टमको रिर्पाट आयो । डाक्टरहरुको अनुसार हत्या अगाडि सेक्सुवल रिलेसन भएको बताइएको छ । अझैं पनि हामीले न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा एकरत्ति विश्वस्त छैन किनकी यहाँ पीडितलाई झन पीडा थप्ने खेल चलिरहेको छ र यो खेलमा एउटा अपराधीलाई जोगाउन गृहमन्त्रीज्यू कम्मर कस्सेर लाग्नुभएको छ । गृहमन्त्रीज्यू यस्तै अपराधीहरुलाई बोक्दै पीडित माथि बुट बर्साउदै जानुभयो भने तपाइको बाँकी राजनीति कहाँसम्म पुग्ला ? के यस्तै अपराधीलाई संरक्षण गर्नेलाई हो तपाईहरुले राजनीति गरेको ?
राज्यको संयन्त्रको काम पीडित मैत्री हुनुपर्ने हो तर पीडकसँगको मिलेमतोमा उल्टै हामीलाई सताइयो । हाम्रो एउटा प्रश्न छ,गृहमन्त्री र प्रहरीको हाकिमहरुलाई । यदि तपाईको छोरी चेलीलाई कसैले ललाई फकाई लिभिङ टुगेदरको सम्बन्धमा रहेर पछि चित्त नबुझे पछाडि हत्या गरिदिँदा मेरै छोरी÷ चेलीले आत्महत्या गरेको हो भनेर स्वीर्कान सक्नुहुन्छ ?उहिले न्याय हराए गोखा जानु भनिन्थ्यो । अब हामी गोर्खाली न्याय खोज्दै कहाँ जाने,एउटा गोर्खाली नन्द प्रसाद न्यायको भीख माग्दा माग्दै प्राण नै त्याग्न विवश भए । के हामीले पनि न्यायको खोजीमा उसैगरी प्राण त्याग्न पर्नै हो ?
विष्णुराम गिरी,पालुङटार गोर्खा,
आफ्नै सांसदले झण्डै चुटेका थिए उर्जामन्त्री जर्नादन शर्मालाई
One thought on “गृहमन्त्रीज्यू ! मेरो बहिनीको ठाँउमा तपाईको बहिनीको हत्या भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ?”
बिष्णुरामजी को कुरा सुन्दा मलाई धेरै दुख लाग्यो अब यो देशमा गरिब जनता को लागि कतै न्यायछैनअहिले नेपालमा सबै नेता, सरकारी क्रमचारी, पत्रकार, प्रहरी, वकिल सब भ्रस्टचारी छन् | कांग्रेसका भ्रस्ट गृहमन्त्रीबाट र अन्य ठुलो ओहदाका भ्रस्टचारी बर्गबाट तपाईले न्याय पाउनुहोला जस्तो लाग्दैन | तपाईलाई नेपाली जनताको आवाजको खाचो छ |
फेरी कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा आगजनी
अव अखिल यस्तो बन्नुपर्छ